တနေ့တည်းနဲ့ ဝတ်စုံ ၃စုံ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Lady GaGa – FemaleWear.net
တနေ့တည်းနဲ့ ဝတ်စုံ ၃စုံ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Lady GaGa
Fashion ဘုရင်မလို့ တင်စားလို့ရတဲ့ ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော် လေဒီဂါဂါ ကတော့ သူမရဲ့ New York နေ့ရက်တွေမှာ တနေ့တည်းနဲ့ mood မတူညီတဲ့ ဝတ်စုံ ၃ မျိုးကို လဲလှယ်ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဝတ်စုံကတော့ အဖြူရောင် vintage dress လေးကို ဝတ်ဆင်ပြီး အနက်ရောင် clutch လေးကို ကိုင်ကာ အနက်ရောင် shoe လေးနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ခဲ့တာပါ။ ဒီဝတ်စုံလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ Lady GaGa ကို ရိုးရှင်းပြီး ကျော့မော့တဲ့ အလှနဲ့ studio သွားတာကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Gaga spotted in NYC just now! (May 24, 2018)
A post shared by LadyGaga (@ladygaganewz) on May 24, 2018 at 1:53pm PDT
တနေ့တည်းမှာဘဲ ဒုတိယဝတ်စုံအဖြစ် အဝါရောင်နဲ့ ခဲရောင် စပ်ထားတဲ့ jacket နဲ့ skirt suit ကိုတွဲဖက်ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝတ်စုံနဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်တဲ့ accessories တွေကတော့ ပထမဝတ်စုံနဲ့ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ accessories တွေကို ပြန်လည်အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Gaga was just spotted again leaving the recording studio in NYC! According to 24/7Paps TV, she's been filming / taking pictures inside the studio with @itsTonyBennett foranew project.
A post shared by LadyGaga (@ladygaganewz) on May 24, 2018 at 4:21pm PDT
နောက်ဆုံး ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ အနီအလန်းစားဝတ်စုံလေးကတော့ Lady GaGa ရဲ့ ဒီဇိုင်းအစစ်မှန်တခုဆိုတာကို ထင်ဟပ်နေစေပါတယ်။ ဒီအနီရောင်ဝတ်စုံလေးကိုလည်း တနေ့တည်းမှာဘဲ ဝတ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဝတ်စုံနဲ့ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ accessories တွေကတော့ ရှေ့မှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ပုံစံတွေနဲ့မတူကွဲပြားနေတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဒီအနီရောင် ဂါဝန်လေးကိုတော့ လိပ်ပြာလိုတောင်ပံလေးနဲ့ ဖန်တီးချုပ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အနက်ရောင် လက်အိတ်နဲ့အတူ အနက်ရောင် ပိုက်ဆံအိတ်လေးကို တွဲဖက်ထားပါတယ်။ ဖိနပ်ကတော့ ရှေ့ကဝတ်စုံတွေနဲ့အတူ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဖိနပ်ကိုဘဲပြန်လည်အသုံးပြုထားပြီး jewelley တွေအနေနဲ့ လက်ကောက်၊ ဆွဲကြိုး၊ နားကပ် တို့ကို တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားပါသေးတယ်။ ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ New York ရဲ့နေ့ရက်တွေမှာ တစ်ရက်တည်းနဲ့ mood မတူဘဲကွဲပြားခြားနားနေခဲ့တဲ့ GaGa ရဲ့ ဖက်ရှင်လေးတွေကို တချက်ရှိုးလိုက်ရအောင်နော်။
A post shared by LadyGaga (@ladygaganewz) on May 24, 2018 at 6:41pm PDT
Tags: Celebrity, Fashion, Fashion Designer
T-shirt ပေါ်က စာသားကြောင့် လူစိတ်ဝင်စားမှုများခဲ့တဲ့ Victoria ရဲ့ဖက်ရှင်အသစ်
Sexy ပို့စ်နဲ့တွေ့ရမယ့် Selena ရဲ့ PUMA Campaign